Factlọ ọrụ ngwaahịa - China Products Manufacturers, Suppliers
Ngwaahịa anyị na-agbaso usoro ISO9001 na CE maka njikwa mma, nke na-eduga n'ịdị elu mbipụta dị elu, mkpebi dị elu na mmetụta obibi akwụkwọ zuru oke. Anyị na-enye ọtụtụ nha nke UV na-ebi akwụkwọ ebi akwụkwọ nke kwekọrọ na ihe dị iche iche, gụnyere plastik, metal, iko, seramiiki tile, acrylic, akpụkpọ anụ, achara, osisi na okwute, wdg.
kacha ewu ewu na rotary UV flat ...
High Quality 3D Digital Ink ...
Multi Portable Size UV ​​Printer Inkjet Flatbed Printing Machine Na Rotary N'ihi Ewepụghị na sịlịnda Bottle enyemaka 3D Embossed
UV Flatbed ngwa nbipute Ngwa:
A. industrylọ ọrụ ịchọ mma
B. Glass, Efere ụlọ ọrụ;
C. Mgbasa ozi & ụlọ ọrụ nbanye;
D. Ngwongwo na ahaziri iche wdg.
UV Printer UV 8 Agba Digital UV Flatbed Printer
Nnukwu agba agba obere obere UV na-ebi akwụkwọ nwere ike ibipụta na roraty na ihe mbadamba site na otu onye nbipute, Ọ nwere ike ibipụta agba, ọcha na varnish n'otu oge ahụ.Ọ na-akwadokwa nbipụta enyo na nloghachi azụ nke pụtara na ọ nwere ike ịrụ ọrụ na ụdị ụlọ ọrụ ọ bụla .
1. A dịgasị iche iche bipụta isi nhazi, Epson i3200-u / Epson 4720 / Ricoh G5i
2. High nkenke akpaka usoro;
3. Ọfụma mgbochi nkukota usoro;
4. Jiri Ikanam oyi okpomọkụ gwọọ technology, ogologo ọrụ ndụ, ala oriri ike;
5. Ọgụgụ isi ink larịị mkpu usoro;
Ngosi ihe ngosi / Mgbidi mgbidi / Mbipụta osisi / Ngwa ngwaahịa / ngwaahịa KT / Acryli Labels / Acryli lamp / Glass background / Igbe nkwakọ / Arts na onyinye onyinye / Okwu ekwentị
1. configurationdị nhazi isi mbipụta dị iche iche, Ricoh, Konica;
ígwè obibi akwụkwọ igwe ịrịba ama na ngwa nbipute UV flatbed
The uru nke anyị UV flatbed ebi akwụkwọ igwe:
1. UV flatbed ebi eji Ricoh Gen5 printhead, enweghị prehead buut na-agba ọsọ, ịzọpụta oge na ume;
2. Ikanam UV oriọna na-enweghị preheat buut na-agba ọsọ, na ogologo ojiji ndụ, ịzọpụta oge na ume;
3. UV ink, gburugburu ebe obibi na ọ dịghị-isi ntọhapụ, ozugbo gwọọ, na-adịghị mfe ịjụ oyi;
4. Nwere ike iji ink na-acha ọcha, na nrugharị onwe ya na ọrụ ịkwanye onwe ya, zere ink na-acha ọcha iji kpalie na ịkwakọ ngwaahịa ahụ;
5. UV flatbed ebi Z-axis elu nwere ike mfe ebuli na ala, ẹdude elu nke 100mm, elu nwere ike ahaziri;
6. UV flatbed ngwa nbipute hyperfine obibi na nnukwu arụmọrụ na 1440dpi;
Uru nke ndị na-ebi UV na ụlọ ọrụ mgbasa ozi:
1. Ahaziri du
UV na-ebipụta ndị na-ebi akwụkwọ akwụkwọ na-ezute mkpa mmadụ niile n'otu oke. Maka ndị na-emepụta imewe, ndị na-ebipụta UV bụ ozioma ha, ha nwere ike gbanwee ihe eji emepụta ihe na kọmputa na uche gị, ruo mgbe onye ahịa nwere afọ ojuju na mmepụta ahụ. Printingkpụrụ obibi UV nwere ike nweta mbipụta foto dị nro.
2. Teknụzụ dị elu
N'ozuzu, a na-emecha onyinyo ahụ zuru oke n'otu oge, agba nwayọọ nwayọọ na-enweta mmetụta foto kpamkpam, nhazi ahụ ziri ezi, ọnụego mkpofu bụ efu, a na-echekwa ọtụtụ ndị ọrụ na ihe onwunwe, na ezigbo akwụkwọ na-abụghị efere na-emezu. Ọ nwere ike iji ego rụọ ọrụ obere oge na ọkara oge, na-enyere ụlọ ọrụ aka ịbawanye ohere azụmaahịa na uru.
UV Flatbed Printer C + W + Varnish UV Printer maka Ọnọdụ ekwentị, Glass, Cylinder Bottle Multi-layer Printing
Maka ndị na-ebipụta akwụkwọ nke UV, ị ga-eji nke mbụ etinyere na ink, ejikwala katriji ink na-abụghị nke mbụ, n'ihi na ọtụtụ katrij ink ga-enwe sponges, na sponges nke mpempe akwụkwọ na-abụghị nke mbụ ga-enwe ọtụtụ ọkụ ọkụ, na igwe anaghị agba nchara iyo họrọ maka ink tinyekwa apụghị izute ọkọlọtọ, Ọtụtụ mgbe, ime ka nozulu mkpọchi, na ya pụta bụ enweghị atụ.
rotary UV flatbed karama ngwa nbipute igwe
Gịnị ihe nwere ike UV flatbed na-ebi akwụkwọ ebi akwụkwọ
1. Igwe na-ebi akwụkwọ
Ebe ọ bụ na elu nke iko ahụ dị larịị, ọ bụ ihe na-esiri ike ibipụta. Ihe nkpuchi kwesiri ka edozi ya tupu edeputa ya iji gbochie foto a ka ọ daa ma daa, meziwanye adhesion, ma hụ na mmetụta mbipụta ahụ mara mma. Igwe na-ebi akwụkwọ nwere ike ibipụta ọtụtụ usoro.
2. bipụta taịl
N'ihi otu ojiji nke taịl nile, usoro ibipụta ihe na taịl nile na-abụrịrị nsogbu na ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ. Tupu ịpịpụta taịl nile, ọ dị mkpa ịrụ ezigbo ọrụ nke ọgwụgwọ mkpuchi iji nweta nsonaazụ mmiri na-enweghị mmiri, ihe ngosi anyanwụ na ọkọ na-eguzogide ọkọ.
ngwa nbipute ink karama plastic cylinder flatbed UV ngwa nbipute
Ngwaahịa: Nnukwu agba agba obere obere UV na-ebi akwụkwọ nwere ike ibipụta na roraty na ihe dị larịị site na otu onye nbipute, Ọ nwere ike ibipụta agba, ọcha na varnish n'otu oge ahụ.Ọ na-akwadokwa nbipụta enyo na nloghachi azụ nke pụtara na ọ nwere ike ịrụ ọrụ na ụdị niile nke mmepụta ụlọ ọrụ.
banyere anyị ahịa netwọk kpọtụrụ anyị ọrụ